भवन निर्माण तथा मर्मतका लागि प्रदेश सरकारबाट चार करोड ८०लाख प्राप्त | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
भवन निर्माण तथा मर्मतका लागि प्रदेश सरकारबाट चार करोड ८०लाख प्राप्त
Published On : २८ श्रावण २०७७, बुधबार ०८:५८
दराैँदी समाचारदाताः गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखामा यसबर्ष शहरी विकास तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नका लागि चार करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजनमार्फत खर्च गर्ने गरी प्रदेश सरकारले सो रकम बिनियोजन गरेको हो ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्णयहरुको अभिलेख अनुसार गाउँपालिका तथा प्रदेश सरकारको सहलगानीमा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण हुने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ३५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै सोही शीर्षकमा धार्चे गाउँपालिकामा पनि बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण हुने भएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले ३५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । त्यस्तै शहीदलखन गाउँपालिकामा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । तीनवटै गाउँपालिकामा बन्ने भवनका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका र बिभिन्न संघसंस्थाले पनि सहलगानी गर्नेुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले गोरखाका सामुदायिक तथा अन्य भवन निर्माण तथा मर्मत सुधारका लागि ८० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले भच्चेक बजारमा नमूना एकीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत थानीथान पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना को प्रस्तावित जलाशय भन्दा माथिको क्षेत्रमा सामाजिक, भौतिक र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक ल करोड ८० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । सो बजेटबाट साबिक आरुचनौटे गाविसको वडा नं १ देखि वडा नं. ६ सम्मका भूभागमा कार्यक्रम गरिने छ । त्यस्तै धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका सबै वडामा सो कार्यक्रम गरिने जनाएको छ ।